Saddex qof oo kale oo gobolka Iowa ah ayaa u dhintey dhibaatooyinka COVID-19, oo ay ku jiraan mid | KWIT
Saddex qof oo kale oo gobolka Iowa ah ayaa u dhintey dhibaatooyinka COVID-19, oo ay ku jiraan mid
By Halima Osman • Sep 14, 2020
Saddex qof oo kale oo gobolka Iowa ah ayaa u dhintey dhibaatooyinka COVID-19, oo ay ku jiraan mid kale oo ka tirsan Gobolka Woodbury, wadar ahaan 59. Waxaa jirey 32 kiis oo cusub oo gobolka ah iyo ku dhowaad 400 oo gobolka ah intii lagu jirey 24-saacadood . Waxaa jiray 1,222 dhimasho gobolka oo dhan tan iyo bilowgii cudurka faafa, ku dhowaad 73,000 ayaa laga helay cudurka.
434 qof ayaa ku dhimatay Nebraska. Waxaa jira ku dhowaad 38,200 oo qof oo tijaabooyin wanaagsan qaba. Gudoomiyaha Pete Ricketts ayaa qabtay shir jaraa'id subaxnimadii maanta. Wuxuu xasuusiyay Nebraskans inay sii wadaan raacida tilmaamaha COVID-19; sida xirashada wejiga wajiga, in badan gacmaha la dhaqo iyo ka fogaanshaha bulshada. Wuxuu sheegay in taxaddarku uu gacan ka geysan doono xakameynta faafidda cudurka iyo in hoos loo dhigo awoodda isbitaalka. Wuxuu kaloo ku daray 341,000 oo qof inay iska diiwaangeliyeen Test Nebraska.
Nebraska waxay u dhaqaaqday wajiga 4 ee xaddidaadaha coronavirus laga bilaabo maanta. Tallaabada xigta waxay ka koobnaan doontaa in xayiraadaha laga wada qaado. Si kastaba ha noqotee, gudoomiyuhu wuxuu sheegayaa inuusan ogeyn goorta ay taasi dhici karto.
Dhamaadka sanadka dhammaan ardayda dhigata Dugsiyada Beesha ee Magaalada Sioux waxay heli doonaan cunno bilaash ah. Degmadu waxay waalidiinta ku wargelisay barnaamijka usbuuca dhammaadkiisa ee USDA. Ardayda sameysa barashada farsamada gacanta waxay qaadan karaan cunadooda halkii.
Nin u dhashay magaalada Sioux City ayaa wajahaya eedeymo la xiriira dil Darajo 1aad iyo Dhaawac Will
By Halima Osman • Sep 11, 2020
Nin u dhashay magaalada Sioux City ayaa wajahaya eedeymo la xiriira dil Darajo 1aad iyo Dhaawac Willful ka dib labo toorey oo lagu dhuftay Sioux City habeenimadii.
Jawaab bixiyayaashii ugu horreeyay waxay heleen nin 37 jir ah iyo haweeney 43 jir ah oo leh dhowr dhaawacyo mindi ah. Labada galbeedba illaa MercyOne oo ah halka uu ninku ku dhintey isla markaana haweeneyda laga daweynayo dhaawacyo halis ah.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay muujineysaa in darsin kale oo Iowans ah ay u dhinteen
By Halima Osman & Mulki Osman • Sep 10, 2020
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay muujineysaa in darsin kale oo Iowans ah ay u dhinteen COVID-19. Shan boqol oo kale ayaa laga helay viruska mudo 24 saacadood ah oo ku eg 10 subaxnimo
Faafitaanka coronavirus wuxuu ku socday xawaare deg deg ah magaalada Iowa intii lagu jiray fasaxa
By Halima Osman • Sep 8, 2020
Faafitaanka coronavirus wuxuu ku socday xawaare deg deg ah magaalada Iowa intii lagu jiray fasaxa maalinta shaqaalaha iyadoo xogta gobolka ay muujisay kororka isbitaalada iyo tirada sii kordheysa ee bukaanada laga daweeyay viruska daryeelka degdega ah.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo warisay inay jiraan 345 kiis oo cusub oo la xaqiijiyay Talaadadii, taasoo ka tarjumeysa tiro yar sababtoo ah baaritaan la'aan maalinta Shaqaalaha.
Lix qof oo kale ayaa dhimatay, taas oo wadarta ka dhigaysa 1,173.
Degmada Dugsiga Bulshada ee Magaalada Sioux ayaa ka warbixisay daraasado daraasad tobanaan ah oo
By Halima Osman • Sep 4, 2020
Degmada Dugsiga Bulshada ee Magaalada Sioux ayaa ka warbixisay daraasado daraasad tobanaan ah oo COVID-19 ah oo ay ka heleen ardayda iyo shaqaalaha usbuucan.
Shan arday iyo toddobo xubnood oo shaqaale ah, sida ku xusan warbixin toddobaadle ah.
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu sameeyay baadi goob xiriir qofkasta oo xiriir dhow la lehna waxaa loo sheegay inuu iskiis u faquuqo ama karantiillo.
Saraakiisha iskuulka kama hadli doonaan kiisaska gaarka ah ama iskuulada ay saameeyeen.